Torolàlana ho an'ny fitetezana haino aman-jery sosialy | Martech Zone
Alatsinainy Janoary 6, 2014 Alahady 5 Janoary 2014 Douglas Karr
Ity infographic avy amin'ny Lemonly sy 9clouds manome fahitana momba ny fomba fitetezana haino aman-jery sosialy tena miavaka. Ny tanjona dia ny handoko sary mazava hamaly ireo fanontaniana telo voarain'ny 9clouds hatrizay - Inona no tambajotra tokony hampiasaiko? Fa maninona aho no tokony hampiasa Pinterest na Google Plus na [mampiditra tambajotra]? Inona no tambajotra tsara indrindra amin'ny orinasako?
Ny fampahalalana momba ny haino aman-jery sosialy dia misy ny statistika lehibe, ny tsena kendrena, ny mpihaino ary ny fanoloran-tena ho an'ny tambajotra tsirairay. Na dia minitra vitsy monja aza ianao, ity sombin-javatra ity dia hanome anao topy maso tsara ireo tambajotra ary raha mety aminao / mendrika ny fotoanao izany.
Clouds 9 no manomboka Fikarohana haino aman-jery sosialy: mpitari-dalana. Ny infographic dia manasongadina ireo tambajotra izay hasongadina ao amin'ilay boky ary manome anao mason-tsivana ny sasany amin'ireo atin'ny boky.
Tags: 9cloudFacebookmpitari-dalanaGoogle PlusGoogle +voasarimakiranaLinkedInfitetezana haino aman-jery sosialyPinteresthaino aman-jery sosialyTwitterYouTube
Fironana sy faminaniana nomerika ho an'ny taona 2014
Jan 6, 2014 ao amin'ny 11: 45 AM
INDRINDRA mahafinaritra ity mampiseho ny statistinao amin'ny fampiasana ny media sosialy tsirairay. Handeha tsy maintsy handalina azy bebe kokoa azo antoka.